Martial Arts Books in Myanmar - Thaing Wizard
၂၀။ ဘီလီဝုဒျ ၏ နဘမျးသတျနညျး (ဦးလှဒငျ)
192 thoughts on “Martial Arts Books in Myanmar”
Pingback: Thaing Wizard
Pingback: Thai Boxing Book | Thaing Wizard
Pingback: Myanmar Self Defence Methods Book | Thaing Wizard
Pingback: 37 Sword Techniques of Myanmar Book | Thaing Wizard
Pingback: Myanmar Boxing Book | Thaing Wizard
Eh Moo on February 24, 2013 at 5:14 pm said:
hi thank you somuch foragreat website. i am interesting in learning Myanmar thaing and looking for the books. if it ok for you may i have this book? (လျှို့ဝှက်သော ဗန်တို၊ ဗန်ရှည် နည်းများ (သိုင်းဦးချစ်သန်း))
this is myemail acc ehmoo.moo90@gmail.com if it is ok for u can u please send me in my mail?
Aung Thu Htet on February 24, 2013 at 10:43 pm said:
ဟုတ်… အပေါ်မှာ မျည်းကြောင်းနဲ့ strike လုပ်တားတဲ့ စာအုပ်တွေက ebook မလုပ်ရသေးတဲ့စာအုပ်တွေပါ… ဆရာကြီးဦးချစ်သန်းရဲ့ လျှို့ဝှက်သော ဗန်တို၊ ဗန်ရှည် နည်းများ ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို ကျွန်တော် ပြန်ပြီး စာစီဖို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။ နည်းနည်းတော့ စောင့်ရမယ်ဗျာ… တစ်ပတ် နှစ်ပတ်လောက်လဲ ဖြစ်နိုင်သလို တစ်လလောက်အထိလည်း ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်။ အားတဲ့အချိန်မှာ လုပ်ရမှာမို့ပါ။ ရတဲ့အခါကျရင် email ပို့ပေးပါ့မယ်။ ဒါမှမဟုတ် စာအုပ်အသစ်တွေ တင်ဖြစ်တိုင်း သိနေချင်ရင် Home page ရဲ့ ညာဖက်နားမှာ email ဖြည့်တဲ့ အကွက်လေးရှိပါတယ်။ အဲမှာ email ဖြည့်ထည့်ခဲ့ပြီး Follow ကို နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် Thaing Wizard မှာ update တစ်ခုခုလုပ်ဖြစ်တိုင်း email ကနေ သိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Myint Soe on March 12, 2013 at 2:38 am said:
အစ်ကို အသစ်တွေကို အပေါ်ဆုံးတင်ပေးပါလား ဒေါင်းပြီးတဲ့ဟာနဲ့ မဒေါင်းသေးတဲ့ဟာတွေမေ့ကုန်လို့
Aker on May 14, 2013 at 10:41 pm said:
Eh Moo on February 25, 2013 at 11:04 am said:
thank you for your kind work. i have been looking for that books for along time.
Pingback: Please read this post! | Thaing Wizard
Zaw Zaw Aung on February 26, 2013 at 2:52 am said:
မြန်မာလူမျိုးများမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့လေ့လာလေ့ကျင့်နိုင် ဖို့ စာအုပ်များများတင်ပေးလျှင်ကျေးဇူးအထူးတင် ပါမည်။
koyin on February 27, 2013 at 4:33 am said:
ဆရာကြီး မင်းယက္ခ ရေးတဲ့ ခြေဇောက်ထောင်မြန်မာဘာသာ သိုင်းပညာ၊ ဓါးနှစ်လက် ၀ိုက်ထွက်ပညာရပ်များ၊ နန်းစဉ် ဓါးရေး (၃၇) ချင်း စာအုပ်များ ကို ရယူလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ အားလုံးအကျိုးရှိမယ်လို့လဲထင်မြင်မိပါတယ်။
Aung Thu Htet on February 27, 2013 at 9:12 am said:
ဟုတ် လတ်တလောတော့ လက်ထဲမှာ အဲ့စာအုပ်တွေ မရှိသေးပါ။ ဒါပေမယ့် ရတဲ့အခါကျ တင်ပေးပါ့မယ်။
mglay on March 17, 2013 at 8:24 pm said:
အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် မေးထဲကို ပို့ပေးပါဗျာ ဒေါင်းလို့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေလို့ မွေထိုင်း စာအုပ်လေး လိုချင်ပါတယ်
Pingback: လူတိုင်းအတွက် လျှပ်တစ်ပြက် ကိုယ်ခံပညာ (ကွန်ဖူးစိုးမြင့်) | Thaing Wizard
Mint Tara on February 27, 2013 at 11:39 pm said:
ကျေးဇူး အထူး အထူးတင်ပါတယ်..တကယ်ပါ ရင်ဘတ်ကြီတခုလုံးနဲ့ ပါ
Pingback: ဂျီကွန်ဒို (ကွန်ဖူးစိုးမြင့်) | Thaing Wizard
mglay on February 28, 2013 at 8:07 pm said:
စာအုပ်တွေက ဘာလို့ဒေါင်းမရတာလဲ ဗျ …တင်ပေးရင်လဲ သေချာတင်ပေးပါ
Aung Thu Htet on February 28, 2013 at 8:39 pm said:
စာအုပ်တိုင်း download ဆွဲလို့ ရပါတယ်ဗျာ.. တစ်ခုတော့ ရှိတယ်ဗျ… ဒီ page က စာအုပ်တိုင်းက upload မတင်ရသေးပါဘူး။ စာအုပ်နာမည်အောက်မှာ “Download” လို့ အပြာရောင်နဲ့ ရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေပဲ download ဆွဲလို့ရသေးတာပါ။ လတ်တလောမှာတော့ ၆ အုပ် download ဆွဲလို့ ရနေပါပြီ။ သေချာပြန်ကြည့်ကြည့် ပါဦးဗျာ…ကျန်တဲ့စာအုပ်တွေကလည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ebook လုပ်ပြီး တင်ပေးသွားမှာပါ။ နောက်လည်း အဆင်မပြေတာများရှိရင် ခုလိုပဲ ပြောနိုင်ပါတယ်ဗျ… လာလည်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
Myint Soe on March 1, 2013 at 9:08 am said:
ဒေါင်းလို့ရပါတယ်ဗျာ သေချာလေးကြည့်ပါဦး အင်းတာနက်လိုင်းများပြုတ်နေလားလို့
သီဟ on March 1, 2013 at 5:22 am said:
Aung Thu Htet on March 1, 2013 at 7:46 am said:
“မြန်မာနိုင်ငံသိုင်း အဖွဲ့ချုပ်” က ပြုစုထားတဲ့ “မြန်မာ့ကိုယ်ခံပညာ နိသျည်းများ” ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးကို အရင်ဖတ်ထားနှင့်ပါဗျာ… အဲ့ဒီ စာအုပ်ထဲမှာ ပါတာတွေက ဗန်တို၊ ဗန်ရှည် ပညာရပ်ကို လေ့လာသူတိုင်း အရင်ဆုံး ကျင့်သင့်တဲ့ အခြေခံအကွက်တွေမို့ပါ။ ဒီမှာပါ။ http://thaingwizard.wordpress.com/2013/02/21/myanmar-self-defence-methods-book/
နောက်ထပ် ဗန်တို၊ ဗန်ရှည်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ စာအုပ်တွေလည်း တင်ပေးပါဦးမယ်။ လတ်တလောမှာ စာအုပ်လုပ်လို့ မပြီးသေးလို့ပါ။
win si thu on March 2, 2013 at 11:42 am said:
only read and peritice;can i skill this it.please reply.
Aung Thu Htet on March 3, 2013 at 1:49 pm said:
You can do the best. If you haveaproblem come join to the group: http://www.facebook.com/groups/thaingwizard/. In that group, you can ask and discuss about Martial Arts.
chicharito on March 3, 2013 at 1:01 pm said:
သိန်းထိုက်ဇော် on March 7, 2013 at 2:35 pm said:
Pingback: ကိုရီးယားအဆင့်မြင့် ခြေကန်တိုက်နည်းပညာ (ဦးပြည်သိမ်း) | Thaing Wizard
sithunaing on March 18, 2013 at 6:33 pm said:
please in download to about play the numchaku waiting for your reply
Aung Thu Htet on March 18, 2013 at 7:17 pm said:
I’m so sorry for that. I haven’t the book about “Nunchaku”. If you are so want to learn it please be visit to http://www.youtube.com/results?search_query=Nunchaku+Tutorial and enjoy it! But if I get the book about “Nunchaku”, I will upload it for you as fast as I can. Thanks for your visit.
HC on April 4, 2013 at 2:04 pm said:
Can you upload the translation of Mas Oyama’s Vital Karate soon please?
Aung Thu Htet on April 4, 2013 at 7:29 pm said:
Hi HC. The book you want isalittle difficult in scanning process and so I decided to retype the whole book by myself. After then I will upload it. This may take about two months. So, please be patient and enjoy with other books that I uploaed. I’m very thanks for your interesting and visiting to Thaing Wizard website.
HC on April 18, 2013 at 6:42 pm said:
No worries bro, cheers! 🙂
sithunaing on April 5, 2013 at 7:09 pm said:
thank for do MAS Oyama’s Vital karate to retype your own-self.I hope you will be famous.
ထင် on April 7, 2013 at 10:33 pm said:
ကိုအောင်သူထက် ရေ ကျနော့်မှာ
(၁) (၃၇)ချင်း နန်းစဉ်ဓားရေး – မင်းယက္ခ
(၂) တုတ်ရှည်သိုင်း – ဦးချစ်သန်း
(၃) မြန်မာ့ဓား – မင်းယက္ခ
(၄) တုတ်ရိုက်ဓားခုတ် ခုခံနည်းများ – ဦးချစ်သန်း
(၅) အတွင်းအားပညာ – (?)
အဲ့ဒါတွေ ရှိပါတယ်။ သို့သော်လည်း Scan ဖတ်ပေးဖို့ရာ အလုပ်တာဝန်တွေကများလေတော့ ခင်ဗျား လုပ်ပေးနိုင်ရင် ငှားမယ်ဗျာ။
ကျနော်လိုချင်နေတာက တင်ကျည်းတုတ်သိုင်း – မင်းယက္ခ စာအုပ်ဗျ။
Aung Thu Htet on April 9, 2013 at 9:51 am said:
ဟုတ်… အဲ့ငါးအုပ်လုံး ရနိုင်ရင် ငှားချင်ပါတယ်။ သင်္ကြန်ပြီးကျ အစ်ကို့ကို ကျွန်တော် ဆက်သွယ်မယ်ဗျာ။
Adm on April 25, 2013 at 7:01 am said:
Bro can I have book ( secret bando banshay) which u said u will upload later and Bruce lee fighting method book 1 and2translated by sayargyi u pyi thein ? Can u pls send to my mail adman.griever@gmail.com. I appreciate ur help. Pls upload more about bando martial art? Cheers
Aung Thu Htet on April 25, 2013 at 10:18 am said:
Yes, Ko Adman Griever. I’ill upload that books but not now. I ever try to uploadanew book weelky but I need more time to upload that books. Please be patient. When Bruce Lee’s Fighting Method that are translated by Sayagyi U Pye Thein is ready for download, I’ll mail to you. I’ll also try to upload More Books about Myanmar Martial Arts too. Thanks for your interesting and visiting.
minthukhaing on April 25, 2013 at 8:40 pm said:
အခုလို သိုင်းဝပ်ဆိုက်ပေါ်လာတာ တစ်ကယ်ကောင်းတာပါ ကျေးဇူးလည်းတင်မိပါတယ်
ကျွန်တော် အင်တာနက်မှာ ရှာလာတာကြာပြိ အတိုအထွာကလွဲလို.ဒီလိုပြည်.ပြည်.စုံစုံ
သိပ်မရှိပါဘူး အလုပ်အားရင် ဘာလော.တစ်ခုလောက် ရေးဖို.စိတ်ကူးမိပင်မဲ. နှစ်သာကြာလာတယ်
ကိုအောင်သူထက်ရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် တစ်ကယ်ကိုလည်းကောင်းပါတယ်ဗျာ
မြန်မာ.သိုင်းကို ပိုးတိုးတက်တက်အောင် လုပ်ကိုင်နိုင်တာပေါ.ဗျာ
စောညို ရေးခဲ.တဲ. ကရာတေးသိုင်းပညာဆိုတာ ရှိရင်တင်ပေးပါအုန်း
ကျွန်တော.မှာ စာအုပ်တော.ရှိတယ် တော်တော်ဟောာင်းနေလို.ကရာတေးစာအုပ်တွေ
အင်္ဂလိပ်လို. ဖြစ်ဖြစ် မြန်မာလိုဖြစ်ဖြစ်ရရင် တင်ပေးပါအုန်းဗျာ
Aung Thu Htet on April 25, 2013 at 9:40 pm said:
ဟုတ် အစ်ကို… ခုလိုအားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဝေဖန်အကြံပေးချင်တာများ ရှိလာရင်လည်း thaingwizard@gmail.com ကို email ပေးပို့ ပြောကြားနိုင်ပါတယ်။ စာအုပ်တွေကိုလည်း တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး ebook လုပ်ပြီး တင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ Facebook သုံးတယ်ဆိုရင်လည်း http://www.facebook.com/groups/thaingwizard/ ကို အလည်လာခဲ့ပါဦး။ အဲဒီမှာ သိုင်းပညာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မျှဝေမှု၊ ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သိုင်းပညာကို ၀ါသနာပါသူတွေ ဆုံစည်းနိုင်ဖို့ စုရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ facebook မှာ group ဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
wunna htun on May 12, 2013 at 2:53 pm said:
It is very good of u to share about martial art books.
dzthaw on May 20, 2013 at 11:40 am said:
Aung Thu Htet on May 20, 2013 at 11:27 pm said:
ဟုတ်ဗျ။ လောလောဆယ်တော့ http://www.youtube.com/watch?v=JIZVuFr9SAM မှာ ကြည့်ကြည့်ပါ။ Tai Chi 24 From ကို အင်္ဂလိပ်လို အသေးစိတ် ရှင်ပြရင်း သရုပ်ပြထားတာမို့ လိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါက (http://www.youtube.com/user/drpaullamtaichi?feature=watch) သူ့ရဲ့ youtube channel ပါ။ အဲ့မှာ ထိုက်ချိနည်းစနစ်တွေ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Thura Zaw on June 15, 2013 at 7:16 pm said:
Aung Thu Htet on June 16, 2013 at 10:25 pm said:
ဟုတ် တင်ပေးဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ လိုအပ်တာရှိရင်လည်း အကြံပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ… ကျေးဇူးပါ။
Tun on June 21, 2013 at 12:00 pm said:
tailon on July 3, 2013 at 10:38 am said:
ဘရုစ်လီ၏ တိုက်ခိုက်နည်းများ အဆင့်မြင့် နည်းစနစ်ပညာ ၁ (ဦးပြည်သိမ်း)
Aung Thu Htet on July 4, 2013 at 7:32 pm said:
အင်္ဂလိပ်လို မူရင်းစာအုပ်ကတော့ ဒီမှာ တင်ထားပေးပြီးပါပြီဗျာ။ ဘာသာပြန်ကတော့ မတင်ဖြစ်သေးတာက လက်ထဲမှာ copy စာအုပ်ပဲရှိတော့ ဖတ်ရသူတွေ အဆင်မပြေမှာစိုးလို့ပါ။ အမြန်ဆုံးတင်ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။
Nyi Nyi on July 3, 2013 at 2:12 pm said:
သိုင်းပြောင်းပြန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေ ရှာလို့ကိုမတွေ့တော့ဘူး….ရှိရင် share ပေးကြပါဗျာ….ကျေးဇူးတင်ပါတယ်….
Aung Thu Htet on July 4, 2013 at 7:34 pm said:
tailon on July 5, 2013 at 9:56 am said:
ဖြစ်​နိုင်​ရင်​ ၎င်းနှင့်​ပတ်​သတ်​သမျှ တင်​​ပေးပါ
minnaingoo on July 14, 2013 at 10:06 am said:
zaw min htwe on July 18, 2013 at 7:44 pm said:
zaw min htwe on July 18, 2013 at 7:47 pm said:
zaw min htwe on July 18, 2013 at 8:04 pm said:
Aung Thu Htet on July 19, 2013 at 8:52 am said:
ဘယ်စာအုပ်မရတာလဲဗျ။ နံပါတ်-၁ ကနေ နံပါတ်-၁၆ အထိ ၁၆-အုပ်ပဲ တင်ရသေးတာဗျ။ အဲ့စာအုပ်တွေ အကုန် Download လုပ်လို့ရပါတယ်။ မရတဲ့စာအုပ်နာမည်ကို ပြောစေချင်ပါတယ်။ ပြန်စစ်ကြည့်မလို့ပါ။
zaw min htwe on July 19, 2013 at 9:45 am said:
Aung Thu Htet on July 19, 2013 at 9:59 am said:
ဟုတ်။ အဲ့ဒါတော့ အမှန်ပဲ။ မရဆို မတင်ရသေးဘူးလေဗျ။ နံပါတ်(၁)ကနေ နံပါတ်(၁၆)ထိပဲ တင်ရသေးတာ။ ကျန်တာတွေက နောက်ပိုင်းမှ တဖြည်းဖြည်းချင်း scan ဖတ်ပြီး တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
zaw min htwe on July 19, 2013 at 10:04 am said:
Aung Thu Htet on July 19, 2013 at 10:10 am said:
ဘယ်လောက်ကြာမလဲ ဆိုတာကတော့ ပြောရခက်တယ်ဗျ။ စစချင်းကတော့ တစ်ပတ်မှာ တစ်အုပ်ဖြစ်ဖြစ် နှစ်အုပ်ဖြစ်ဖြစ် တင်ပေးနိုင်မယ်လို့ ထင်ခဲ့မိပါတယ်။ လက်တွေ့မှာတော့ မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဗျ။ နှစ်ပတ်တစ်အုပ်လောက်တော့ တင်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်။ ဒီကြားထဲမှာတော့ ၀ါသနာရှင်တွေအတွက် အသုံးဝင်လောက်မဲ့ ဆောင်းပါးတွေကို ရှာဖွေပြီး တင်ပေးသွားပါ့မယ်။ အာပေးနေတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ။
zaw min htwe on July 19, 2013 at 11:26 am said:
zaw min htwe on July 19, 2013 at 3:16 pm said:
zaw min htwe on July 19, 2013 at 3:17 pm said:
zaw min htwe on July 19, 2013 at 3:24 pm said:
zaw min htwe on July 20, 2013 at 3:19 pm said:
Aung Thu Htet on July 20, 2013 at 6:49 pm said:
စာအုပ်တွေကို ebook ပြန်လုပ်ဖို့က နည်းနည်းလက်ဝင်တယ်ဗျ။ တစ်ပတ်ကို တစ်အုပ် ဒါမှမဟုတ် နှစ်ပတ်ကို တစ်အုပ်လောက်တော့ တင်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်ဗျာ။ ကျေးဇူးပါ။
zaw min htwe on July 23, 2013 at 7:21 pm said:
bo josh on July 28, 2013 at 1:34 am said:
thank you very mush plz more book
zarnisoe on August 19, 2013 at 6:59 pm said:
ထိုက်​ကျ စာအုပ်​​လေးတင်​​ပေးပါလားဗျာ ​ကျေးဇူးပြုပြီး
Aung Thu Htet on August 19, 2013 at 8:21 pm said:
ဒီဟာလေးကြည့်ပြီး ကစားကြည့်ပါလားဗျ။ http://www.youtube.com/watch?v=H4BWuX20_nY လေးနာရီစာ ထိုက်ချိကစားနည်း ဗီဒီယိုလေးပါ။ စာအုပ်တွေကတော့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လတ်တလောမှာ တင်ဖြစ်ဦးမှာ မဟုတ်သေးဘူးဗျ။ နောက်ပြီး စာအုပ်ဖတ်တာထက် ဗီဒီယိုကြည့်ပြီး လုပ်ရင် ပိုလွယ်မှာမို့ ဒီဟာလေးကို ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်လဲ လိုအပ်တာရှိရင် အကြံပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။
thura myo on August 31, 2013 at 9:01 am said:
မင်းယက္ခရဲ့ မြန်မာ့ဓား စာအုပ်ကလေး လိုချင်ပါတယ်ဗျာ
minnanthu on September 3, 2013 at 9:10 pm said:
နောက်ထပ်e-booksတွေ မတင်တာကြာပြီနော် ဘာဖြစ်လို့လဲဗျ
minnanthu on September 3, 2013 at 9:14 pm said:
Aung Thu Htet on September 4, 2013 at 11:49 am said:
ဟုတ်ကဲ့။ မအားလို့ မလုပ်ဖြစ်တာပါ။ အသစ်တွေ ဆက်ပြီး တင်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်။ ခုလိုမျိုး အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
akharpaybaydin on September 14, 2013 at 10:24 am said:
လာလည်​သွားပါတယ်​။ အရမ်းကြိုက်​ပါတယ်​။ ကျွန်​​တော့်​ site မှာ Link လုပ်​​ထားလိုက်​ပါ့မယ်​။
Aung Thu Htet on September 14, 2013 at 2:33 pm said:
Nay Lin on September 24, 2013 at 8:32 am said:
Aung Thu Htet on October 2, 2013 at 11:56 am said:
လက်ထဲမှာမရှိသေးလို့ပါဗျာ။ ရတဲ့အခါ တင်ပေးပါ့မယ်။ ကျေးဇူးပါ။
Khant Minn Hein on September 30, 2013 at 7:56 pm said:
zaw minn latt on October 10, 2013 at 2:38 pm said:
zaw minn latt on October 12, 2013 at 10:55 am said:
myohtet on November 7, 2013 at 2:28 pm said:
ကျွန်တော်ဆီမှာ တင်ကျည်းတုတ်သိုင်းစာအုပ်၊ ဆရာကြီးဦးချစ်သန်း ဓါးခုတ် တုတ်ရိုက် ခုခံနည်းစာအုပ် ဆရာကြီးဦးပြည်သိမ်းရှောင်လင်မုန်တိုင်းလက်နှစ်အုပ်တွဲ၊ ဆရာကြီးဦးပြည်သိမ်းခရာတေး (၁၊၂၊၃၊၄)တွဲစာအုပ် ၊ တရုတ်ကျန့်ဓားသိုင်းစာအုပ် ၊ ဆရာကြီးကွန်ဖူးဦးစိုးမြင့် အဆင့်မြင့်ဗန်ဒိုထိမ်းချုပ်နည်းစာအုပ် ၊ ဆရာကြီးဦးစိုးမြင့် ထိုက်ချိစာအုပ်၊ စောညို ဂျူ တိုစာအုပ်၊ဆရာရန်နိုင်(နဂါးရာဇာသိုင်းသင်တန်းကျောင်း)ရဲ့ ဗန်ဒိုသင်ရိုးညွှန်းတမ်းစာအုပ်များ(၁အဆင့်မှဆရာအဆင့်ထိ) ကွန်ဖူး သင်ရိုးညွှန်းတမ်း(၁အဆင့်မှ ဆရာအဆင့်ထိ)၊ ဆရာဥိးချစ်သန်းရဲ့ လက်သီးထိုးခုခံနည်းများစာအုပ် စသည့်စာအုပ်များ ရှိပါသည် သူငယ်ချင်းလိုအပ်ရင်ငှားပါမည် ။
ကျွန်တော် ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းက ကလေးတွေနဲ့ မိဘမဲ့ ကလေးတွေကို စိတ်ဓါတ်ခွန်အား ရှိအောင် ကိုယ်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိအောင် ပညာဒါနသိုင်းပညာ အခမဲ့ သင်ပေးခွင့်ရအောင် ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ် အခုဆရာအင်အားလိုအပ်နေပါတယ် သူငယ်ချင်းတို့ ပါဝင်ကူညီစေချင်ပါတယ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို အခမဲ့ သင်ပေးပါမည်။ မှတ်ချက် (အခြေခံ သိုင်းပညာ တစ်ခုခုတော့ တက်ရမည်) yazarkumarya@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပါ။
Aung Thu Htet on November 10, 2013 at 7:35 pm said:
ဟုတ်ဗျ။ ကျေးဇူးပါ။ စာအုပ်တွေတော့ ငှားချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုလောလောဆယ်တော့ ebook လုပ်ဖို့ အချိန်မရသေးလို့ ငှားရမှာ အားနာတယ်ဗျ။ နောက်ပိုင်း လုပ်ဖြစ်တဲ့အခါ ငှားပါရစေ။ အဲ့ဒီ email ကနေပဲ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ့မယ်။ ပညာဒါနသိုင်းသင်ပေးဖို့အတွက် ကိစ္စကတော့ ကျွန်တော် facebook ပေါ်က သိုင်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ group တွေထဲမှာ မေးကြည့်ကြည့်ဦးမယ်ဗျ။
kk on May 22, 2015 at 3:30 pm said:
Wai Yan on November 13, 2013 at 11:46 pm said:
Aung Thu Htet on November 14, 2013 at 11:11 am said:
ဟုတ် ကြိုးစားပါ့မယ်။ ကျေးဇူးပါ။ ဒီမှာ update သိပ်မလုပ်ဖြစ်ပေမယ့် facebook ပေါ်မှာတော့ အခြားလုပ်ရှားမှုတွေရှိပါတယ်။ အားလပ်ရင် https://www.facebook.com/groups/thaingwizard နဲ့ https://www.facebook.com/ThaingWizard ကိုလည်း အလည်လာနိုင်ပါတယ်။
​ကောင်းမျိုးဟိန်း on January 25, 2014 at 2:26 pm said:
အသုံးချကရာ​တေးအတွဲ ၃ တင်​​ပေးနိုင်​မလာခင်​ဗျာ
Aung Thu Htet on January 25, 2014 at 6:47 pm said:
ခုလောလောဆယ်တော့ မလုပ်ဖြစ်သေးဘူးဗျ။ နောက်ပိုင်းကျ တင်ပေးပါ့မယ်။
​ကောင်းမျိုးဟိန်း on January 25, 2014 at 2:30 pm said:
လိုအပ်​သည့်​စာအုပ်​များကို comment တွင်​​ရေးသွားနိုင်​ပါသည်​ကူညီနိုင်​ကကူညီပါမည်​
Yenaingaung on January 30, 2014 at 11:23 am said:
ဖြစ်နိူင်ရင် တင်ကျည်း တုတ်သိုင်းနှင့် နန်းစဉ်ဓားရေး ၃၇ ချင်း စာအုပ်လိုချင်ပါတယ်
Aung Thu Htet on January 30, 2014 at 9:34 pm said:
ဟုတ်ကဲ့… မအားသေးလို့ပါ။ နောက်ပိုင်းကျရင် ebook လုပ်ပေးပါ့မယ်။ လိုတာရှိလည်းပြောပါ။
Yenaingaung on February 2, 2014 at 9:40 pm said:
Online ga nay bal lo buy lo ya Lae ma Thi bu
Aung Thu Htet on February 3, 2014 at 10:20 am said:
http://thaingwizard.wordpress.com/2013/11/18/martial-arts-book-news/ မှာ ရေးထားပါတယ်။ အဲ့မှာဖော်ပြပေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေကတော့ နိုင်ငံခြားကနေလည်း လှမ်းမှာလို့ရပါတယ်။ ပါရမီစာပေက လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ တခြားသိုင်းစာအုပ်တွေကတော့ မရနိုင်ပါဘူး။ လိုချင်ရင် ကိုယ်တိုင် စာအုပ်အဟောင်းဆိုင်တွေမှာ လိုက်ရှာဝယ်နိုင်မှရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
KOZAW on June 16, 2014 at 6:11 pm said:
နန်းစဉ်ဓားရေး ၃၇ တင်ပေးပါအုံး ဖတ်ချင်ပါတယ် ခင်ဗျား
aung zaya on February 6, 2014 at 3:05 pm said:
မြန်မာ့သိုင်းပညာသမိုင်း စာအုပ်များရနိုင်မလားခင်ဗျာ ကျနော်၂၀၀၀ပြည့်နှစ်လောက်ကတည်းကရှာနေတာပါ…ကျေးဇူးတင်လျှက်
Aung Thu Htet on February 6, 2014 at 5:58 pm said:
ရနိုင်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ကဆိုရင် တော်ဝင်စင်တာ တတိယထပ်က Tab စာအုပ်ဆိုင်မှာ ၀ယ်နိုင်ပါတယ်။ original တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကော်ပီတွေပါ။ ဈေးနှုန်းက ၃၆၀၀ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက် ရှောင်လင်မုန်တိုင်းလက်၊ ဘရုစလီခြေကန်နည်း၊ ထိုက်ချိ ၈၈ ကွက် စာအုပ်တွေလည်း ကော်ပီတွေ အဲ့ဒီမှာ တွေ့ပါတယ်။ သွားကြည့်ကြည့်ပါ။ တခြားစာအုပ်တွေလည်း ထပ်ပြီး တင်ထားချင် တင်ထားပါလိမ့်မယ်။
aung zaya on August 22, 2014 at 3:23 pm said:
ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီထက်ပိုပြီးအများအကျိုးသယ်ပိုးနိုင်ပါစေ။ အလုပ်တွေတော်တော်များနေလို့ ဒီpage ကို မရောက်ဖြစ်လို့ တင်ထားတဲ့ စေတနာရှင်ကို အားနာမိပါတယ် ကိုယ်ကတောင်းထားပြီး မရောက်ဖြစ်ခဲ့တာ စိတ်မရှိပါနဲ့ခင်ဗျာ။
aung kyaw thu on March 12, 2014 at 9:45 am said:
ထိုက်ချိ သိုင်း စာအုပ်လေး တင်ပေးစေလိုပါတယ်
Aung Thu Htet on March 12, 2014 at 10:42 am said:
ဟုတ်ကဲ့။ စာအုပ်တွေတော့ရှိပါတယ်။ နောက်ပိုင်းအဆင်ပြေရင် လုပ်ပေးသွားပါ့မယ်။ အခုလောလောဆယ်တော့ လုပ်ဖြစ်ဦးမှာ မဟုတ်သေးဘူးဗျ။ ဒါပေမယ့် ထိုက်ချိစာအုပ်လိုချင်ရင် တော်ဝင်စင်တာက Tab Book Store မှာ ရှိပါတယ်။ ဆရာကြီး ကွန်ဖူးစိုးမြင့်ရဲ့ ထိုက်ချိ-၈၈-ဖောင် ကစားနည်းစာအုပ် ကော်ပီဝယ်လို့ရပါတယ်။ ရောင်းဈေးက ၃၆၀၀ လောက် ဖြစ်ပါတယ်။
​ကောင်းမျိုးဟိန်း on March 14, 2014 at 8:15 pm said:
ဓားနှစ်​လက်​သိုင်းစာအုပ်​မှာကစာမျက်​ကျန်​​နေသလိုပဲမာတိကာမှာက၁၀၈မျက်​နှာထိရှိပါတယ်​ပြီး​တော့bruce lee fighting method3စာမျက်​နှာ​တွေကပြတ်​​နေပါတယ်​နည်းနည်း​​ပြန်​စစ်​ကြည့်​​ပေးပါ။​ကျေးဇူးပါ။
Aung Thu Htet on March 18, 2014 at 9:58 am said:
ဟုတ်ကဲ့။ ခုလို အသိပေးတာကျေးဇူးပါ။ ဓားနှစ်လက်သိုင်းစာအုပ်က ကျွန်တော်လက်ထဲမှာ မရှိတာမို့ ခုချက်ချင်းတော့ ပြန်လုပ်ပေးဖြစ်ဦးမှာ မဟုတ်ဘူးဗျ။ စာအုပ်လုပ်ပေးတဲ့အစ်ကိုကို ပြန်ပြီးအကူအညီတောင်းကြည့်ပါဦးမယ်။ bruce lee fighting method3ကတော့ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း အင်တာနက်ကနေပဲ download ယူပြီး ပြန်တင်ထားတာပါ။ တစ်ချို့စာမျက်နှာတွေမှာ စာရွက်ဘေးသားတွေ ပျက်နေတာ ဟုတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက်တော့ update လုပ်လို့ရမှာ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ကျေးဇူးပါ။ တခြားလိုအပ်တာများတွေ့ရင်လည်း အခုလိုပဲ အကြံပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
kyawthuwin on March 24, 2014 at 2:46 am said:
Aung Thu Htet on March 24, 2014 at 7:00 am said:
ဟုတ်ကဲ့ ယခုတင်ပေးထားတဲ့ သိုင်းပြောင်းပြန်စာအုပ်က ပထမတွဲလို့ အမည်တပ်ထားပေမယ့် ဒုတိယတွဲ ဆက်လက်မထွက်ဖြစ်တဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ အစ်ကိုပြောတဲ့အတိုင်း သိုင်းပြောင်းပြန်လက်သိုင်းစာအုပ်နဲ့ ဓားနှစ်လက်သိုင်းစာအုပ်တွေမှာ download အခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင် စာအုပ်တစ်အုပ်ကို file size 10 MB ၀န်းကျင်ထက် မကျော်အောင် လုပ်ပါတယ်။ ယခုစာအုပ်များမှာတော့ စေတနာရှင် အစ်ကိုများက ebook လုပ်ပြီး ကျွန်တော့်ဆီ ပို့ပေးခဲ့တာတွေမို့ file size အတွက် ပြန်ချုံ့ပေးဖို့ မဖြစ်နိုင်သေးပါ။ နောက်ပိုင်း အဆင်ပြေရင်တော့ ယခုစာအုပ်တွေကို ebook ပြန်လုပ်ပေးပါ့မယ်ဗျာ။ အစ်ကိုက နယ်ကဆိုပေမယ့် ရန်ကုန်ကို လူကြုံရှိတယ်ဆိုရင် သိုင်းပြောင်းပြန်စာအုပ်ကို ၀ယ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်။ ပန်းဆိုးတန်းတစ်ဝိုက်က စာအုပ်အဟောင်းဆိုင်တွေမှာ ကော်ပီတွေရောင်းပါတယ်။ ရောင်းဈေးကတော့ ၂၀၀၀ နဲ့ ၃၀၀၀ ကြားလောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးပါ။ တခြားလိုတာရှိလည်းပြောပါ။
Ko Pyae on April 21, 2014 at 12:32 pm said:
Aung Thu Htet on April 21, 2014 at 2:28 pm said:
တောသားလေး မောင်ငြိမ်း on April 22, 2014 at 10:05 am said:
အခုလို အားတဲ့အချိန်လေးမှာ အားသလိုတင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်မျာ
တောသားလေး မောင်ငြိမ်း on April 22, 2014 at 10:10 am said:
နောင်မှာ လိုအပ်တာလေးများရှိရင် တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ပါရမီဖြည့်ချင်ပါတယ်ခင်မျာ
Aung Thu Htet on April 22, 2014 at 1:46 pm said:
Mg Nyein on May 21, 2014 at 11:37 am said:
ကြိုးဝိုင်းနည်း စာအုပ်ရှိရင်လည်း တင်ပေးပါအုံးခင်မျာ အခုလို စာအုပ်ကောင်းတွေတင်ပေးတဲ့ ဆရာသမား များကို ကျေးဇူးတင် ဂါရပြုပါတယ်ခင်မျာ
kyaw min tun on May 27, 2014 at 5:23 pm said:
အခုလိုစာအုပ်ကောင်းတွေတင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။အကွက်သိုင်း။ေ၇ှာင်လင်မုန်တိုင်းလက်ရင်ဆိုင်တိုက်နည်း။ဘရုစလီပွဲတွေ့ကွန်ဖူး(၁)(၂)(၃)တို့ တင်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
Aung Thu Htet on May 27, 2014 at 9:25 pm said:
ဟုတ်ကဲ့။ ကြိုးစားပါ့မယ်။ ရှောင်လင်မုန်တိုင်းလက်နဲ့ ဘရုစလီကွန်ဖူး စာအုပ်တွေကတော့ တော်ဝင်စင်တာက Tab Book Store မှာ ရှိမလားပဲ။ အရင်က ကော်ပီတွေ ရောင်းတာတွေ့ဖူးပါတယ်။
kyaw min tun on May 27, 2014 at 5:27 pm said:
သိုင်းကျောင်းလိပ်စာတွေဖော်ပြဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ ။
Aung Thu Htet on May 27, 2014 at 9:23 pm said:
http://thaingwizard.wordpress.com/martial-arts-institute/ မှာ တင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
kyaw min tun on May 31, 2014 at 12:36 pm said:
အကိုကျွန်တော့် ကိုလေ ဦးပြေသိမ်းရဲ့ ကျားနှင့် ကြိုးကြာယှဉ်တိုက်သိုင်း ကိုတင်ပေးလို့ ရလားမသိဘူး…………….
kyaw min tun on June 18, 2014 at 5:19 pm said:
အကိုေ၇ ဆ၇ာကွန်ဖူးစိုးမြင့်၇ဲ.လိပ်စာအမှန်သိချင်ပါတယ်။ ။
arkar on June 27, 2014 at 4:49 pm said:
အကြောတွေပျော့သွာ:အောင်လေ့ကျင့်နည်:လေ:ပေ:ပါလာ:ပေါင် ကာ:နိုင်အောင် လို့စာအုပ် တွေကိုdownထာ:လိုက်တယ် တစ်ကယ့်ပါရမီရှင် ပဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူ:နော်ကြို:စာ:ပါအာ:ပေ:နေပါတယ်
chit ko on June 28, 2014 at 9:08 pm said:
Aung Thu Htet on June 28, 2014 at 10:19 pm said:
ဟုတ်… လိုအပ်မယ်ဆိုရင် ဆရာကြီးကွန်ဖူးစိုးမြင့်ရဲ့ “လူတိုင်းအတွက် လျှပ်တစ်ပြက် ကိုယ်ခံပညာ” စာအုပ်ကို download ယူနိုင်ပါတယ်။ ရုတ်တရတ် ရန်မူခံရတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ပြန်လည်တုံ့ပြန်နိုင်ဖို့ နည်းစနစ်တွေချည်း ရေးထားတဲ့စာအုပ်ပါ။
kyaw lay (bio) on July 27, 2014 at 7:50 pm said:
အကိုေ၇…….အသုံးခြကရာတေးအတွဲ ၃ ။ကဘာ့သတ်ပုတ်နည်းများ တို့ ဘယ်တော့တင်မလဲခင်မျာ။
Aung Thu Htet on August 1, 2014 at 4:04 pm said:
ဟုတ် အခုလောလောဆယ် မအားလို့ စာအုပ်အသစ် မလုပ်ဖြစ်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်း ဆက်လုပ်ဖို့ အစီအစဉ်တော့ရှိပါတယ်။
kyaw lay on July 28, 2014 at 9:31 pm said:
TAB book centre အပြင်တခြားသိုင်းစာပေတွေရန်ကုန်မှာရှိသေးလား။ ။
Aung Thu Htet on August 1, 2014 at 4:02 pm said:
သိုင်းစာပေရယ်လို့ သီးသန့်မရှိပါဘူး။ သိုင်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာအုပ်တွေက စာအုပ်အဟောင်းဆိုင်တွေမှာပဲ ရပါတော့တယ်။ သိုင်းစာအုပ်ဝယ်မယ်ဆိုရင် Tab Book Centre အပြင် မြို့ထဲပန်းဆိုးတန်းတစ်ဝိုက်က စာအုပ်အဟောင်းဆိုင်တွေမှာ ရှာဝယ်မှပဲရပါမယ်။
ဦး​ကောင်း on August 6, 2014 at 8:27 am said:
Aung Thu Htet on August 7, 2014 at 2:23 pm said:
ဟုတ် နောက်ပိုင်းတင်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ မအားသေးလို့ပါ။
Zan on August 7, 2014 at 1:06 am said:
ကိုပြည်. on August 7, 2014 at 8:03 pm said:
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗျာ ကျနေ်ာတို.ရဲ. ရိုးရာသိုင်းပညာနဲ. ပက်သက်ပြီး မပျောက်ပျက်အောင် ထိန်းသိမ်းပေးတဲ.အတွက် လေး စားပါတယ်
နောက်တခု က ဗျ ဆရာဒီပံလင်း လားတော.မသိဘူး မုဒြာတွေရဲ. ပါဝါအကြောင်းကို ရေးထားတဲ. စာအုပ်ဖတ်ချင်ပါတယ်ဗျာ
Aung Thu Htet on August 8, 2014 at 1:55 pm said:
ဟုတ် ဆရာဒီပံလင်းရေးတဲ့ မုဒြာပါဝါအကြောင်းစာအုပ်တော့ ကျွန်တော့်မှာ မရှိပါဘူး။ ခုလတ်တလောဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Myanmar Fitness Game website က အကိုတစ်ယောက်ရေးထားတဲ့ “Fitness ကစားတဲ့ဂိမ်း”စာအုပ်ကို download ဆွဲပြီး ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့ထဲမှာ မုဒြာအသုံးချနည်းတွေ ပါပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင် ဒီမှာကူးယူနိုင်ပါတယ်။ http://myanmarfitnessgame.wordpress.com/2014/04/06/myanmar-fitness-game-ebook-2nd-edition/
kyaw lay (bio) on August 18, 2014 at 7:20 pm said:
thiha on August 21, 2014 at 9:27 am said:
thank u bro for ur invaluable work. If u can I would like to ask for u some more books about Thaing Byaung Byan and အကွက်သိုင်း by ဆရာကြီးဦးပြည်သိမ်း. May u beascholar in every existence of ur circle of life!!! Never mind I have difficulties writing Burmese.
က﻿လေးသား on August 30, 2014 at 11:48 am said:
kyaw on September 9, 2014 at 1:02 pm said:
​ပေးနိုင်​ရင်​ တင်​​စေချင်​ ပါတယ်​
theinhtike on September 16, 2014 at 1:52 pm said:
သိုင်းပြောင်းပြန် ဒုတိယတွဲ တင်ပေးစေချင်ပါတယ်
မြန်မာ့သိုင်းပညာကို ပြန်လည်ပြန့်ပွားစေအောင် တင်ပေးတာကောင်းပါတယ်
Aung Thu Htet on September 26, 2014 at 2:52 pm said:
ဒုတိယတွဲ မရှိပါခင်ဗျာ။ ပထမတွဲ ထုတ်ပြီး ဆက်မထွက်ဖြစ်တော့တာပါ။
Htun on September 18, 2014 at 7:33 pm said:
ဆရာကြီးသန်လျင်ဦးအောင်သ်ိန်းရဲ့ သိုင်းပြောင်းပြန်အတွဲ ၂ ရှိရင်တင်ပေးပါအုံးဗျာ
Aung Thu Htet on September 26, 2014 at 2:56 pm said:
အတွဲ(၂) မရှိပါခင်ဗျာ။ အတွဲ(၁)ပြီး ဆက်မထွက်ဖြစ်တော့တာပါ။
Nay Thu Rein on September 19, 2014 at 3:07 pm said:
သိုင်းပညာနှင့် ပတ်သက်သော ရှား ပါး စာအုပ် စာတမ်း တွေ စနစ်တကျ စု စည်း ဝေငှ ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
kyaw lay(bio) on October 1, 2014 at 4:42 pm said:
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ။ဆရာကြီးကွန်ဖူးစိုးမြင်.ရဲ.စာအုပ်တွေလိုချင်နေသူတွေအတွက်သတင်းကောင်းပေးပါရစေ။ဆရာ.တပည်.တွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော.ဆရာရေးခဲ.သမျှစာအုပ်တွေကိုသိုင်းစာပေတစ်ခုတည်ထောင်ပြီးပြန်ထုတ်ဝေဖို.ရှိပါတယ်။(၁၀)ပိုင်းအကုန်လောက်လုပ်ပစ်မှာပါ။ ။
joker on October 10, 2014 at 12:53 pm said:
အသုံးချကရာတေး ၁၊၂၊၃၊ တင်ပေးစေချင်ပါတယ်
​aung zay ya on October 23, 2014 at 4:48 pm said:
သူရိန် on January 7, 2015 at 2:52 am said:
minnhtetkaungmon on January 27, 2015 at 9:22 pm said:
aung on February 7, 2015 at 12:07 pm said:
အကို﻿ရေ judo ကိုင်﻿﻿ပေါါက်﻿နည်းနဲ့နဲ့ပတ်﻿သတ်﻿တဲ့စာအုပ်﻿﻿လေးများ(or)freedownload link ﻿လေးမျာားကိုတင်﻿﻿ပေးပါင်္ဉီး please ﻿ကျေးဇူးပါ
Aung Thu Htet on February 9, 2015 at 12:05 pm said:
ဟုတ်ကဲ့။ စာအုပ်တွေက ရှိပါတယ်။ ebook မလုပ်ရသေးလို့ပါ။ နောက်ပိုင်းကျရင် တင်ပေးပါ့မယ်။
အလင်းစစ် လင်း on February 17, 2015 at 10:46 am said:
zaw myo chit on February 9, 2015 at 3:43 pm said:
Aung Thu Htet on February 10, 2015 at 10:28 am said:
ဟုတ်ကဲ့။ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ၀ူရှူးစာအုပ်အသစ်တစ်အုပ် တင်ထားတာရှိပါတယ်။ ဒီမှာပါ။ http://thaingwizard.wordpress.com/2015/02/06/8-forms-of-tai-chi-for-your-health/
zaw myo chit on February 16, 2015 at 4:31 pm said:
ထန်ရှင်း on February 17, 2015 at 9:41 pm said:
ဦးပြည်သိမ်းရဲ့ လျှိူ့ဝှက်သော ကမာ့တိုက်ခိုက်နည်းများ ရှိရင်တင်ပေးပါလား
Aung Thu Htet on February 23, 2015 at 9:07 am said:
ဟုတ်ကဲ့။ စာအုပ်ရှိပါတယ်။ ebook မလုပ်ရသေးလို့ပါ။
ထန်ရှင်း on June 1, 2015 at 1:11 am said:
ဦးပြည်သိမ်းရဲ့ လျှိူ့ဝှက်သော ကမ္ဘာ့တိုက်ခိုက်နည်းများ ရှိရင်တင်ပေးပါလား အင်္ဂလိပ်လိုရော မြန်မာလိုရော ဘယ်မှာမှ ရှာမရလို့ပါ
​ကျော်​သူ on March 12, 2015 at 4:47 pm said:
ကင်​ဒို ဓားကစားနည်းစာအုပ်​ရှိလား ရှိရင်​တင်​​ပေးပါခင်​ဗျာ
yae zaw lynn on April 8, 2015 at 1:23 am said:
ပွဲ​ကျောင်းနဲ့ ပတ်​သတ်​တာ​လေး​တွေ တင်​​ပေးပါဗျာ ​တောင်းဆိုတာပါ
Naing Zaw on April 28, 2015 at 10:03 am said:
ဒီထဲက စာအုပ်​​တွေက ​​ဒေါင်းမရဘူးဖြစ်​​နေတယ်​
​ဒေါင်းလင့်​ ​သေသွားတာလားမသိဘူး ဆရာ
Aung Thu Htet on April 29, 2015 at 12:05 pm said:
ဟုတ်။ Internet Connection ကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချက်လောက်ပြန်စမ်းကြည့်ပါဦး။
kyawlay(bio) on May 4, 2015 at 8:21 am said:
thaing wizard မှညီကိုများအတွက်သတင်းကောင်း…………………. သိုင်းဆရာကြီးဦးပြေသိမ်းနှင်.ဦးချစ်သန်းတို.ဧ။်တပည်.ရင်းဖြစ်သူလူငယ်သိုင်းပင်မဦး စီးသိုင်းဆရာကြီးဦးအောင်ကျော်စန်းမှနွေရာသီသိုင်းသင်တန်းများပြန်လည်ဖွင်.လှစ်သင်ကြားပေးနေပါပြီ……….မည်သူမဆိုအခ မဲ.သင်ကြားနိုင်ပါသည်…………တက်ရောက်ချင်သူများအနေဖြင်.အောက်ပါဖုန်းနံပတ်များသို.ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်……….. ဆရာကြီးဦးအောင်ကျော်စန်း -၀၉၂၆၀၂၀၄၄၄၃ ကိုဝေလင်းဦး -၀၉၄၂၃၆၈၈၉၈၅ ကိုကျော်ကျော် -၀၉၂၆၀၂၀၁၉၁၇ မှတ်ချက်။ ။အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေတရက်တည်းသာသင်ကြာပေးပါသည်။ ။
kyawlay(bio) on May 4, 2015 at 8:27 am said:
ဦးချစ်သန်း + ဦးပြေသိမ်းတို.၏စာအုပ်များ၊ဓါတ်ပုံများ
ပါ ကူးယူ နိုင် သည်.အပြင်မရှင်း လင်းသောအကွက်များနှင်.စာများပါမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Thiha on June 1, 2015 at 8:30 am said:
အစ်ကို ဖြစ်နိုင်ရင် တင်ကျည်းတုတ်သိုင်းစာအုပ်၊ ဆရာကြီးဦးချစ်သန်း ဓါးခုတ် တုတ်ရိုက် ခုခံနည်းစာအုပ် ဆရာကြီးကွန်ဖူးဦးစိုးမြင့် အဆင့်မြင့်ဗန်ဒိုထိမ်းချုပ်နည်းစာအုပ် ၊ ဆရာရန်နိုင်(နဂါးရာဇာသိုင်းသင်တန်းကျောင်း)ရဲ့ ဗန်ဒိုသင်ရိုးညွှန်းတမ်းစာအုပ်များ(၁အဆင့်မှဆရာအဆင့်ထိ) ကွန်ဖူး သင်ရိုးညွှန်းတမ်း(၁အဆင့်မှ ဆရာအဆင့်ထိ)၊ ဆရာဥိးချစ်သန်းရဲ့ လက်သီးထိုးခုခံနည်းများစာအုပ် လေးတွေတင်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဆီမှာ English လိုရေးထားတဲ့ စာအုပ်လေးတွေရှိပါတယ် ( jujitsu , wun chuan , aikido , shaolin , aikijujitsu etc )။ebook တွေပါ။ အစ်ကို လိုတာရှိရင် ကျွန်တော်လည်း တတ်နိုင်ရင် ပို့ပေးပါ့မယ်။အသစ်လေးတွေတင်ပေးပါဦး။အထူးသဖြင့် ဗန်ဒို စာအုပ်လေးတွေပေါ့။တင်းကျည်းတုတ်သိုင်း ကိုလည်းအရမ်းလိုချင်ပါတယ်။မြန်မာ့သိုင်း ကို တခြားသိုင်း တွေထက် ပို လေးစားဂုဏ်ယူ လို့ လိုချင်တာပါ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
Saii Kham Moa on June 10, 2015 at 12:15 am said:
ပွဲကျောင်းသမိုင်းကြောင်းမှာ ထင်ရှားခဲ့တဲ့ အောင်စည်းခုံသံဃရာဇာ ဆရာတော် အကြောင်းရေးထားတဲ့ စာအုပ်လေးတင်ပေးလို့ ရမလားဗျ။
tin oo on June 21, 2015 at 4:30 pm said:
ဒီဆိုက်ကစာအုပ်မှန်သမျှဒေါင်းလု ပ်ဆွဲထားပါတယ် နောက်လဲစာအုပ်ကောင်းများစွာတင်ပေးပါဦလို့အထူးဘဲကျေးဇူးတင် ပါတယ် ပိုက်စံတွေလဲ မလိုအပ်ဘဲ ကုန်ကုန်သွားတာပါ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနေရင် ပြည့်ခါနီးလေ ပြုတ်ကြသွားလိုက် အစကပြန်ဆွဲနဲ့ အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ် ရာတာလဲခင် ဗျာ
သန်းထိုက်အောင် on August 10, 2015 at 6:01 pm said:
သန်းတင့်စံ on August 19, 2015 at 8:54 pm said:
Wing chun သိုင်းစာအုပ်ဒေါင်းမလို့ပါ တင်ထားတာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်
Jeet kune do ကိုတော့တွေ့တယ်
Si Thu on August 20, 2015 at 4:05 pm said:
ဗန်တိုလေ့ကျင့်နည်း video file ရှိလားအစ်ကို။ရှိရင်တင်ပေးစေချင်ပါတယ်
Nyeinorton on September 26, 2015 at 9:02 pm said:
I Love thaingwizard
Sa Nay Maumg Maung on September 30, 2015 at 8:10 pm said:
wailwinban on June 5, 2021 at 5:51 pm said: